QM oo kordhisay muddada UNSOM iyo Danire Abuukar oo dhaliil culus u jeediyey - Caasimada Online
Home Warar QM oo kordhisay muddada UNSOM iyo Danire Abuukar oo dhaliil culus u...
QM oo kordhisay muddada UNSOM iyo Danire Abuukar oo dhaliil culus u jeediyey
Washington (Caasimada Online) – Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa meel mariyay qaraar lagu cusboonaysiinayo shaqada xafiiska Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya muddo shan bilood ah.
Qaraar tirsigiisu yahay 2632 oo ay si wada jir ah u ansixiyeen 15-ka xubnood ee golaha, ayaa loogu ogolaaday in xafiisku sii shaqeeyo ilaa Oct. 31, 2022.
Golaha ammaanka ayaa ka codsaday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay in uu golaha si joogto ah ula socodsiiyo meel marinta qaraarkan, iyadoo warbixinta xigtana ay ku egtahay 31-ka Agoosto.
Dhinaca kale, Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Amb: Cusman Abuukar Baalle oo ka qeyb galayay kulanka golaha ammaanka, ayaa soo dhoweeyay dib u cusboonaysiinta loo sameeyay howgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM).
Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale ku dhaliilay howlgalka UNSOM sida uu haatan u shaqeeyo inuusan la jaan-qaadi Karin horumarka ka socda Soomaaliya.
Abuukar Baalle wuxuu sheegay in hawl-galku uu noqday kuwo ka fal-celiya dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya iyada oo ay yar tahay awoodda ay ku kala horraysiiyaan oo ay wax uga qabtaan horumarka siyaasadda iyo amniga Soomaaliya.
Baalle, wuxuu ugu yeeray UNSOM inay kaalmadeeda Soomaaliya ahaato mid ka tarjunta rajada dadka Soomaaliyeed iyo mudnaanta baahiyadaha qaran ee dowladda Soomaaliya.
Ma ahan markii ugu horraysay oo danjiraha Soomaaliya ee UN-KA uu eedayn u jeediyo UNSOM. Balse Sannadihii ugu dambeeyay sidaan oo kale ayuu danjiruhu u dhaliilayay shaqada UNSOM.
Golaha ammaanka ayaa UNSOM u sameeyay muddo kordhin shan bilood ah oo ku eg bisha Octobar ee sannadkan. Si kastaba ha ahaatee. Waajibaadka UNSOM ayaa ku ekaa dhammaadka bishaan May.